सबै युवती उत्तिकै सुन्दर हुन्छन - पुरुष - नारी
सबै युवती उत्तिकै सुन्दर हुन्छन
आकाश श्रेष्ठ, नायक
संसारमा सबैभन्दा बढी माया कसको लाग्छ ?
तपाईंको जीवनमा महत्व राख्ने महिला ?
आमा, दिदी, आन्टीहरूलगायत मेरा सहकर्मी नायिका तथा प्रशंसकहरू सबैको उत्तिकै महत्व छ । महिलाहरू ममताका खानी हुन्, जसमा सद्भाव तथा नि:स्वार्थ माया हुन्छ ।
कस्ता युवतीप्रति आकर्षित हुनुहुन्छ ?
हरेक युवती उत्तिकै सुन्दर हुन्छन् । मलाई हँसिला, मीठो बोल्ने तथा सकारात्मक सोच भएका युवतीले आकर्षित गर्छन् ।
आफूले अभिनय गरेकामध्ये कुन नायिकासँग काम गर्न सजिलो लाग्यो ?
मैले छोटो समयमै धेरै नायिकासँग काम गर्ने अवसर पाएँ । २ वटा चलचित्र तथा २ दर्जनभन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा करिश्मा मानन्धरदेखि प्रियंका, आँचल एवं साम्राज्ञी आदिसँग काम गर्न पाएँ । सबैसँगको सहकार्य रमाइलो रह्यो ।
नेपाली महिलाहरूको सकारात्मक पक्ष ?
नेपाली महिलाहरू काममा अग्रसर, उत्सुक एवं समर्पित छन् । ट्याम्पु ड्राइभरदेखि कर्पाेरेट लेबलसम्म महिलाहरूको उपस्थिति उत्साहजनक छ । नेपाली महिलाहरूमा कामप्रति सम्मान छ ।
नेपाली महिलाहरूको नकारात्मक पक्ष ?
सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष भन्नु नै डाहा तथा इगो हो ।
वैशाख २५, २०७६ - पुर्व राष्ट्रपतिपुत्री अनिता भन्छिन् - प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउन सक्ने सम्भावना छ
चैत्र २६, २०७५ - सुन्दर देखिन नयाँ प्रविधि
माघ १६, २०७५ - मिस टिन एन्जेल पुर्णिमा